चोलेन्द्र शमशेरको अग्नि परीक्षा
खान मनलाग्ने सबै खाइसके, लाउन मनलाग्ने सबै लाइसके, पाउनुपर्ने प्रधानन्यायधीशको पद पनि पाइसके । जीवनका सुख र सम्मान पाइसकेपछि अव इतिहास बनाउने मौका छ ।
मौका बारबार आउन्न । नेपाली भएर जन्मेका प्रधानन्यायाधीशले नेपाली हुँ भनेर सच्चा देशभक्ति देखाउने बेला अहिले नै हो । समय गएपछि फर्कन्न, अवसर गुमेपछि आउन्न ।
भारतका विदेशमन्त्री गोखले १४ गते नेपाल आए, उनले सरकार प्रमुखदेखि धेरैलाई भेटेर फर्किए । त्यसको ४ दिन पछि अर्थात चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले ७७ जिल्लामै परिपत्र पठाएर आदेश दियो– नेपाली नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता बितरण गरिदिनु ।
संसदमा नागरिकता विधेयक विचाराधीन छ, गृहले संसदभन्दा माथि उक्लेर भन्यो– नागरिकता दिनु ।
२०५४ सालमा बाँडिएका नागरिकता गलत हो भनेर सर्वोच्चले २०५८ सालमै खारेज गरिसकेको हो । तिनका सन्तानलाई समेत फेरि नागरिकता बितरण सुरु भयो ? मानौ नेपाली नागरिकता पञ्चदेवलको हण्डी हो ।
अधिवक्ता वोर्ण बहादुर कार्कीले रिट हाले, यसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ– २०५४ सालमा जन्मसिद्धको नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजनको नागरिकता वितरण नगर्नु ।
बरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्कीको भनाइ अनुसार– अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार जन्मशिद्धका नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई समेत वंशजको नागरिकता दिन तत्काल रोक लगाउन माँग गरे पनि ५४ सालमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई मात्र वंशजको नागरिकता नदिन भनेको छ । ५४ सालमा जितेन्द्रनारायण देव संयोजकत्वजको कार्यदलको सिफारिसका आधारमा वितरण भएको नागरिकता सर्वोच्चले नै २०५८ साल साउन ८ गते बदर गरेको थियो । अदालतले समेत देशको हित नहेर्ने हो भने विदेशी दबाबा र प्रभावमा राजनीतिकर्मीले देशको अस्मिता घुमाउरो पाराले सिध्याउने निश्चित षडयन्त्र देखिन थालेका छन् ।
सर्वोच्चले नागरिकता टोलीलाई नै अवैधानिक घोषणा गरेर वितरण भएका नागरिकता बदर गर्न फैसला गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्डबाट भने हटाइएको थिएन । बदर भइसकेकाले समेत
पाउने अवस्था रहेको भन्दै नदिन सर्वोच्चको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको काँधमा देशरक्षाको जिम्मेवारी आएको छ । जिम्मेवारीले उनको इतिहास उज्यालिन पनि सक्छ । यसका लागि नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गने सक्छन् यिनले ।
के सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले देश हितमा विदेशी प्रभावमा परेका नेताभन्दा माथि उठेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्लान् ? उनमा क्षमता र इच्छाशक्ति छ भन्ने विश्वास आम नगारिकमा छ । त्यो विश्वासमा खरो उत्रिए यिनले आफ्नो इतिहास उज्यालो लेख्नेछन् ।